नछोपिएको दाग, लाज छोप्न हत्या गर्दा आजिवन मानसिक कैद-NepalKanoon.com
जिवित बच्चाको हक कायम गर्न आफ्नै शिशु हत्या गर्ने आमालाई अदालतको सहुलियत
हो । त्यो बच्चाको जन्म मैले नै दिएकी हुँ । त्यो अबोध नवजात शिशु मेरो कोखबाट नै जन्मेको हो । त्यो जन्माउन पनि मैले अन्य छोराछोरी सरह एउटा आमाले पाउने सबै दुख पाएकीछु । त्यो शिशु मैले मायाँ नलागेर वा मेरो शत्रु भएर मारेकि हैन । त्यो बच्चाको भाग्य नै यस्तै थियो । मेरो भाग्यमा पनि आफ्नै छोरी मार्नु लेखिएको थियो सायद ।
उसकबो मृत्यु र जन्मको समयमा कत्ति पनि फरक छैन । धर्तिमा टेकेको एक पल र लिईएको सास नै पहीलो अन्तीम थियो । त्यो सब मैले नै गरेकी हुँ । रगत नपुछ्दै एक चित्कार नआउदै बच्चाको घाँटी थिचि मैले नै मारेकी हुँ । यो प्रहरी सामु एउटी आमाले गरेको बयाँन हो । उनी मृतक बच्चीकी आमा हुन । आमाको गरिमा र ममता सहीत त्यो भन्दा अघि ति@
A्चा जन्माएर हुर्काई सकेकी छन, आफु भन्दा बढी ति छोराछोरीलाई माया गर्छिन । तर चौथो भएर जन्मीएको त्यो बच्चाको हत्यारा पनि तिनै आमा हुन । कति फरक छ एउटै आमाका यि दुई रुपमा । तर किन तिनै छोराछोरीका लागि भगवान आमाको रुप परिर्वत भयो त ?
यस्ता आमाहरु कयौ होलान । जस्ले जन्म दिदाको पिडा भुलेर बिभिन्न कारणले आमा भन्ने शब्द नै अपवित्र बनाउछन वा ममतामयी आमा बाट हत्यारा राक्षिसी आमाको रुपमा एकै पटक देखिन्छन । यस्तै आमा मध्यकि एक हुन नुवाकोट जिल्ला, खानीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ४ कि राममाया राई । उनले बच्चा मारिन, बच्चा मरेपछि कोपरामा बच्चालाई हालीन, केही बेर आफु सुत्ने खाटमुनी लुकाई राखिन । उनले रुदै यसरी नै भन्दै गईन । भुईमा लागेका रगतलाई मेटाउन लिपपोत गरिदिईन । त्यसपछि स्कूल गएका छोरा छोरी घरमा आएपछि खाना खाई छोराछोरी सुतेपछि कोपरामा हाली राखेको बच्चालाई खानीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थित चन्द्रप्रसाद ढकालको वित नजिकको कुलोमा लगी
फालिदिईन । एउटा मानव अस्तित्वको अध्याय समाप्त भयो । केही घण्टमै जन्म मृत्यु र सदगत समेत तिनै आमाले गरिन, जस्को खास उत्तर र उद्देश्य छैन कि किन जन्म दिईन, किन हत्या गरिन र किन उसको अस्तितव अज्ञात रुपमा समाप्त पारिन ।
तर प्रहरीले उनले लुकाउन खोजेको जन्म र मृत्यु दुबै थाहा पायो, उनले लुकाउन सकिनन । पूर्वमा चन्द्रप्रसाद ढकालको खेत, पश्चिममा पानीको कुलो उत्तरमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र माधव जोशीका खेत र दक्षिणमा चन्द्रप्रकाश ढकालको खेती ४ किल्लाभित्र १ फीट ५ ईञ्च लामा भएको भर्खरै जन्मिएको बच्ची ९स्त्री लिङ्ग० मतवाली जस्तो देखिने बच्चाको लास, कपाल सजिलैसँग उखेल्दा नउखेलीने दुवै आँखा बन्द रहेको, नाकको दुवै प्वालबाट रगत तथा फिज निस्किएको, मुख बन्द रहेको पेटको अवस्था सामान्य रहेको नाल नकाटिएको, दुवै खुट्टाको तिघ्रा तथा पिडुलाको भाग पानीले भिजी ढाडिएको जस्तो देखिएको, घाँटीमा छाला खोस्रिएको, नाभीमा जोडिएको साल रहेको मलद्वारमा कालो लेउजस्तो पदार्थ जस्तो जमेको एक अबोध नवजात शिशु प्रहरीले फेला पार्यो । अनी सुरु भयो उनले गरेको अपराधको अपराध हत्या प्रकरणको मुद्दा ।
अदालत सम्म पुग्दा उनले बच्ने ईच्छामा, अपराध लुकाउन झुटो बोलीन । जुन हाम्रो देशको कानुनको संस्कार पनि हो, कानुन ब्याबशायि द्वारा नै बयान यस्तो दिनु भनेर सिकाईन्छ । उनकोे परिबर्तित आवाज यस्तो थियो । “२०५९ साल फागुन २५ गतेका दिन म बारीमा काम गर्न जाँदा कान्लाबाट खसे, भुँडी थिचिन पुग्यो । त्यसको भोली पल्ट २६ गते मरेको बच्चाको जन्मभयो । त्यस बच्चालाई कुलामा लगी फाली दिएको हुँ । प्रहरीमा पनि मरेको बच्चा जन्मिएको भनेको थिएँ । के के लेखियो थाहा छैन । जन्मेको बच्चा मेरो पतिसँगको सहवासबाट पाएको हो । मेरो श्रीमान २०५९ साल जेठ २५ गते कतार जानु भएको छ । बच्चा मेरो पेटमा ९ महिना रह्यो । बच्चा जन्मदा कोही पनि थिएन र कसैलाई पनि भनिन । मरेको बच्चा कोपरामा राखी फाली दिएको हो । कुलोमा फालेको हुँदा काठ दाउराहरूले काटिएको होला ।” जन्मदै मर्नुपरेको त्यो शिशुको मृत्युको यो फरक झुट्टो कथा ।
जे होस उनले अपराध गरेको लुकेन । प्रमाणीत भयो त्यो हत्या नै थियो तर खोजियो हत्याको कारण । उनले गरेको कसुर अनुसार उनलाई ज्यान सम्बन्धी महलको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वसहितको जन्म कैदको सजाय हुने निश्चीत छ । तर उनलाई जेल हाल्दा उनी संग भएका जिवित बच्चाहरुको हक खोसिन्थ्यो । उनी वावुआमा भएका टुहुरा बन्नेछन । अदालतलाई समस्या पर्यो, आमाको सजायले ति उनका तिन छोराछोरीलाई कसरी टुहुरा बनाउनु, कसरी अन्याय गर्नु तर फेरी अपराध गर्ने राममायालाई हत्या गरेको प्रमाणित हुदा हुदै के %@
<@87र कसरी छाड्न मिल्छ ? लोग्ने विदेश गएको अवस्थामा बच्चा जन्मेकोले सामाजिक बदनामीको लोक लाजको कारण अपराध घटेको घटनाको प्रकृति अवस्था परिस्थितिलाई हेर्दा उनलाई पुरा सजाय गर्दा चर्को हुने उनका तिन छोराछोरीमाथि पनि बावुआमा नभएसरह अलग रहनु पर्ने हुदा अन्याय हुने भन्दै नुवाकोट अदालतले पाँच बर्षमात्र जेल सजाय सुनायो । यहाँ सजायको र उनको बाध्यताको पनि सम्बन्ध छ । आमाको गल्ती पछिको गल्तीले झन ठुलो गल्ती अनी छोराछोरीलाई अन्याय अदालतले गरेन ।
उनी आफुले हत्या नगरेको भन्दै अघि बढदै गईन । उनलाई पुर्ण सजाय हुनु पर्ने भन्दै मुद्दा पुनराबेदन अदालत पाटन पुग्यो । जुन परिवर्तन भएन राय र निर्णय सदर भयो । फेरी सर्बोच्च सम्म मुद्दा पुग्यो ।
श्रीमान विदेशमा अनी घरमा श्रीमति पर पुरुससँगको अनैतिक यौन सम्बन्धमा,त्यसैको कारण बच्चा जन्मिएको र समाजमा थाहा भए लाज हुने डरले मारेको हुदा उनी निर्दोष छैनन। त्यसैले बच्चा मरेको नै जन्मेको, कुरा मान्न सकिदैन । त्यसैले पुनराबेदन पुग्दैन भनि सर्बोच्चले निर्णय सुनायो । तर प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर भएपछि सजाय तोक्दा विभिन्न कुराहरू विचार गर्नुको अतिरिक्त कति कैद तोक्दा न्यायसंगत हुन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ, भन्दै उनलाई कम सजाय गर्नु न्याय संगत भएको राय सर्वोच्चको रह्यो ।
घटनाक्रम हेर्दा यस मुद्दामा प्रतिवादी विवाहित महिला हुन । उनका पति एक वर्ष अगाडिदेखि बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश कतारमा रहेको र प्रतिवादीको पतिबाट १ छोरा र २ छोरीहरूको जन्मभै सवै नावालक छन। परपुरुष रामकुमार श्रेष्ठसँग भएको यौन सम्बन्धको कारण प्रतिवादीले गर्भधारण गरी बच्चाको जन्म भएको र विवाहित महिलाले लोग्नेको अनुपस्थितिमा परपुरुषसँगको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको कारण सामाजिक लाजबाट बच्नको लागि जन्मिएको बच्चालाई मारेको बुझिन्छ ।
अक्षम्य अपराध तर तल्लो सजाय
जन्मेको उक्त बच्चा जन्मनासाथ बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ । प्रतिवादीको कार्यले नवजात बच्चालाई आफ्नो बाच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरायो । प्रतिवादीको त्यस्तो अपराधलाई क्षमा गर्ने शायद शब्द नहोला तर यस मुद्दामा प्रतिवादीलाई हदैसम्मको कैदसजाय गरेर भन्दा अदालतको तजविजी अधिकारअनुरूप सजाय घटाउदा न्याय पर्न जाने देखिएकाले सजायमा तल्लो हद कायम गरिएको छ ।
आमावावु सहीतका टुहोरा हुन बाट बचाईयो
प्रतिवादीका तीनजना नावालक बच्चाहरू भएको भन्ने देखियो । नावालक, बालबालिकाले माया पाउने आमाबाबुबाटै नै हो बाबु आमाबाट माया पाउने नावालक बच्चाको हकनै हो । नावालक भएको कारण बच्चाहरू सम्पूर्ण हक सुविधा एवं सहुलियतहरू भोग गर्न पाउनु पर्ने बालबालिका हुन । बाबु विदेश गएको आमा जेलमा कैद सजाय भोगीरहेको हुँदा ती नावालक बच्चाहरूको पालनपोषण शिक्षादिक्षा माया प्रेम हेरचाहमा मात्र सीमित रहन पुगेको थियो । तर आमा पनि जेल गए पछि आमावुवा भएका टुहुरा छोराछोरी बन्नु पर्ने स्थितीबाट रोकेर न्याय यस फैसलामा गरिएको छ ।
परपुरुषसँग करणी लुकाउनु हत्याको मुख्य कारण
बाबु आमा दुवै जिवीत रहदारहदै पनि प्रतिवादीका ती बच्चाहरूले टुहुराको जिन्दगी विताउनु परेको देखिन्छ । उमेर हेर्दा ती बच्चाहरूले ती बच्चाहरूले बाबु आमाको संरक्षकत्वमा राम्रो शिक्षा पाउने उमेर देखिन्छ । दुर्भाग्यबस प्रतिवादीका ती बच्चाहरूले आमालाई भेटनपनि जेलमा जानुपर्ने अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई हदैसम्म सजाय गर्नु भनेको प्रतिवादीका ती तीन बच्चाहरूमाथि अन्याय हुने देखिन्छ । मुद्दामा वारदात हुनुको कारण प्रतिवादीको पति हुँदाहुँदै पर पुरुषसँग करणी गरे गराएको कारण बच्चा जन्मिएकोले पर पुरुषसँग गरेको करणी ढाकछोप गरी लुकाउनको लागी मात्र नवजात बच्चा मारिएको देखिन्छ । बच्चा मार्नु नै मुख्य कारण भन्ने देखिदैन । परपुरुषसँग करणी लुकाउनु मुख्य कारणले गर्दा नै नवजात शिशु मारिएको देखिन्छ ।
फरक प्रकृतिको पहीलो मुद्दा र जिन्दगी भरीको मानसिक यातना
उनले जुन कुरा लुकाउन हत्या सम्म गरीन त्यो कुराले उनलाई मानसिक यातना सायद जीवनभर दिईरहन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा केछ भने यस्तो अपराध बारबार दोहरिने र पुनः दोहोरिने अपराधपनि होईन । विवाहिता नारीले आफ्नो पति विदेश गएको अवस्थामा परपुरुषसँग करणी गरी गराई गर्भधारण गरी बच्चा जन्माएको घटनाहरू धेरै छन् । तर पति विदेश गएको कारण नावालक बच्चाहरू अभिभावक विहीन भई बच्चाहरू अलपत्र परि बाबुआमा दुवै जीवित हुँदाहुँदै पनि एक प्रकारले टुहुरा सरह भएको चाहि यो मुद्दा देखियो, सायद यसप्रकारको यो पहिलो मुद्दा हुन सक्छ । तसर्थ यो मुद्दा अरुभन्दा भिन्न खालको देखिएकोले यो मुद्दामा नावालक बच्चाहरूको लागि सजाय घटाउनु नै उचित र न्यायपूर्ण देखिन आयो ।